Faa'iidooyinka Computing Cloud
Shahaadooyinka Dammaanadda Badbaadinta Soodhawaynta ee Dammaanadda-sheyga iyo faa'iidooyinka
Ujeedada iyo faa'iidooyinka koorsada
Noocyada ugu caansan ee caalamiga ah ee adduunka - dariiqa khariidad-darrada ah, ayaa ka soo horjeeda noocyada xisaabinta ee hantida xisaabinta sida CPU, RAM, bacda fidsan, meel bannaan, iyo wixii la mid ah oo lagu wareejiyo webka. Hantidaas waxaa abuuray shabakad aasaasi ah oo ka mid ah server-yada khaaska ah oo la dhigo macluumaad badan oo la ilaaliyo oo diiradda saaraya wada-shaqeynta takhasuska ah ee khibradda leh. Xaalad aan caadi ahayn ee la qabsashada, kala duwanaanshaha iyo tayada aan laheyn ee kharashka diirada la saarayo waa faa'iidooyinka lagama maarmaanka ah ama garashada waxyaabaha muhiimka ah ee xisaabta. Waxaa intaa sii dheer in la tirtiro khasaarihii hantida maadaama ay isticmaasho 'inaad iska bixiso inta aad ka faa'iideysan' muujiso meesha macaamiisha ugu dambeysa looga baahan yahay in ay bixiyaan kaliya hantida ay codsadaan oo ay cunaan.
Barashada muraayada dariiqa ayaa bilaabay in ay ka soo qaadato cagajiido xilli dambe oo ay la wadaagto ururada aduunka iyo kuwa yar yar ee adduunka oo isticmaalaya awoodda daruuraha dariiqa si ay u gutaan bartilmaameedkooda ganacsiga iyo kor u qaadida gacan-qabsiga sare ee ganacsiga.
Barnaamijka "Certified Cloud Security Professional" ama "CCSP" waa kicinta khilaafka ka dhexeeya Isbahaysiga Amniga Bulashada (CSA) iyo (ISC) ², koorsada loo sameeyay si loo buuxiyo oo loo isticmaalo laba shahaadadood oo hadda jira: (ISC) ² 'Professional Certified Information Security Professional iyo CSA' Shahaadada Aqoonta Badbaadada Daruuriga ah.
Horumarinta daruuriga sida kor ku xusan waa mid la isku hallayn karo, la qabsoomi karo oo macquul ah. Si kastaba ha ahaatee, maamullada waxaa lagu wareejiyaa shabakad furan taas oo ka dhigaysa mid u nugul arrimo badan oo khatar ah. Xaaladahaas oo kale, fahamka khatarta amniga xogta daruuriga ah iyo abuurista habraaca si loo yareeyo saameynta ay leedahay muhiimadda aasaasiga ah. Ururada ugu sarreeya ma dhicin karaan inay lumiyaan xogta aasaasiga ah ee ganacsigooda ayna u baahan yihiin xirfadlayaasha karti leh ee haya macluumaadka iyo xirfad si ay wax uga qabtaan wax kasta oo khatar ah.
Barnaamijka "Security Security (CCSP)" ee "Technology Innovative Solutions" wuxuu ku talo jiraa inaad diyaariso dhamaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan awoodda dariiqa daruuriga ah, astaanta amniga ee la isticmaali karo, iyo sida loo xiro si loo damaanad qaado jawi ammaan ah oo ammaan ah. Shahaadadan ka timid aasaaska ugu sarreeya ee aasaasiga ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku guuleysatid qadarka ugu sarreeya ee amniga oo ka caawi ururkaaga inuu isticmaalo awoodda ugu badan ee dariiqa dariiqa cayayaanka oo aan halis ugu jirin ixtiraamka xogta.